I-CBD Amafutha Emulsification Factory - Abakhiqizi nabahlinzeki baseChina CBD
Ama-cannabis extracts (i-CBD, iTHC) angama-molecule e-hydrophobic (hhayi ancibilikayo emanzini). Ukuze unqobe ukungabibikho kwama-cannabinoid emanzini okufaka okudliwayo, iziphuzo kanye nama-cream, kudingeka indlela efanele yokufaka emulsification. I-Ultrasonic ebalulekile i-emulsifier kawoyela ye-CBD isebenzisa amandla e-mechanical sheer force we-ultrasonic cavitation ukunciphisa usayizi we-droplet wama-cannabinoids ukukhiqiza ama-nanoparticles, azoba mancane kune-100nm. I-Ultrasonics ubuchwepheshe obusetshenziswa kabanzi embonini yezemithi f ...
i-ultrasonic insangu kawoyela emulsification yedivayisi ye-nano-emulsion
Izinhlayiya ze-CBD zingahlakazeka ngaphansi kwama-nanometer ayi-100 ukukhiqiza i-viscosity ephansi kanye ne-nanoemulsion ezinzile. Thuthukisa kakhulu ukusetshenziswa kwe-CBD.
Ama-emulsion kawoyela we-CBD akhiqizwa nge-Ultrasonically avame ukuzinza ngaphandle kokufaka i-emulsifier noma i-surfactant. Impilo yemishini yethu ingaphezu kwamahora angama-20 000 futhi ingasebenza ngokuqhubekayo amahora angama-24 ngosuku.
Amandla 1.5 ~ 3KW, 8 ~ 100μm amplitude, 10 ~ 25L / min. Izinga lokugeleza. Ingasabalalisa i-CBD ibe ngaphansi kwe-100nm. Kungenza i-CBD ibambe iqhaza elingcono emikhiqizweni ehlukahlukene yokunakekelwa kwesikhumba nemithi yokusetshenziswa kwangaphandle nangaphakathi.